Iindaba -Iqela le-Eni lase-Italiya lafumana amandla omoya eSpain e-1.2GW kunye neeprojekthi ze-photovoltaic
Inkampani yamandla e-Itali u-Eni ifikelele kwisivumelwano ne-Azora, inkampani ezimeleyo yolawulo lwearhente yokuthenga izindlu, ukuba ithenge ipotifoliyo yamandla e-1.2 GW e-Spain.
Ipotifoliyo yotyalo mali yeAzora ibandakanya iifama zomoya ezintathu ezisebenzayo, enye yefama yomoya eyakhiwayo (enomthamo opheleleyo we-230 MW phakathi kwazo) kunye nesihlanu esikhulu Ilanga Iiprojekthi zamandla kumanqanaba akutshanje ophuhliso, ngenqanaba elipheleleyo le-1GW. Impahla yexabiso ibekwe eAndalusia, Castile-La Mancha, Castile nase Leon, Catalonia, Galicia nase La Rioja.
U-Azora no-Eni bathi bazakusebenza kunye ukuqinisekisa ukuba ezi projekthi zintandathu zelanga zenziwa kwimveliso ngowama-2024, kwaye bongeze ukuba basebenza kwisivumelwano esibanzi sokuqhubeka nokwandisa iqonga lamandla ahlaziyekayo e-Eni eSpain. Imakethi yangena kwintengiso yaseSpain ngoFebruwari ukuthenga iprojekthi ye-140 MW ye-photovoltaic kwi-X-Elio.
USantiago Olivares, iqabane eliphethe utyalo-mali kwiziseko zophuhliso lwe-Azora, uphawule wathi: "Siza kusebenzisa irekhodi lethu elingaphezulu kweminyaka engama-20 kule ndima ukuxhasa isicwangciso sokukhula sika-Eni."
Kwisicwangciso sayo, u-Eni unethemba lokuphuhlisa iphothifoliyo ebalulekileyo yamandla e-Itali. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ibhengeze intsebenziswano kunye neCassa Depositi e Prestiti Equity. Ngo-2025, inkampani iya kutyala imali malunga ne-800 yezigidi zeerandi kwicandelo lamandla ahlaziyekayo elizwe. Ezi nkampani zimbini ziceba ukwakha i-1 GW yeeprojekthi zamandla elanga kunye nomoya zisebenzisa iipropathi zikarhulumente wase-Itali.
Itekhnoloji yeHangchi yinkampani ebanzi ye ibhetri yelanga ,inkqubo yesola ,iphaneli yelanga . Sinoluhlu lwamava kubathengi abaphakathi kunye nabancinci abasuka kwi-1KW-100KW inkqubo yelanga.
Ndiyathemba ukuba singayifumana imibuzo yakho kungekudala.
Ixesha Post: Jul-29-2021